Ngaba amatye anqabileyo amaminerali? Uhlaziyo olutsha 2021 -Imifanekiso emihle
Uninzi lwamatye anqabileyo zizimbiwa
Amatye anqabileyo angengowamvelo
Mineraloids eyenziwe ngabantu
Isimbiwa yinto eyenzeka ngokwendalo yemichiza, ihlala ifom ye-crystalline kwaye ayivelwanga ziinkqubo zobomi. Inobume bemichiza ethile, ngelixa iliwa linokuba sisidibanisi sezimbiwa ezahlukeneyo. Inzululwazi yile yezimbiwa.
Zineempawu ezahlukeneyo zomzimba. Inkcazo yabo ixhomekeke kubume beekhemikhali kunye nokwakheka kwabo. Iimpawu eziqhelekileyo zokwahlula kubandakanya ukwenziwa kwekristale kunye nokuziqhelanisa, nobulukhuni, ubumnandi, ukungafani, umbala, istreak, ubungqindilili, ukucoca, ukuqhekeka, ukwahlukana, ubunzima bomxhuzulane, ubutsalane, incasa okanye ivumba, radioactivity, kunye nokuphendula kwi-asidi.
Umzekelo wezimbiwa: I-Quartz, idayimane, i-corrundum, i-beryl, ...
Kubalulekile ukwahlula phakathi kwamatye okwenziwa, kunye nokulinganisa okanye iigugu ezenziwe.
Iigugu zokwenziwa ngokwasemzimbeni, ngokuchanekileyo nangokwemichiza ziyafana kwilitye lendalo, kodwa zenziwe kuMzi-mveliso. Kwimaket yorhwebo, abathengisi bamatye basebenzisa igama elithi "ilebhu yenziwa". Yenza ilitye lokwenziwa lithengiswe ngakumbi kune "mveliso eyenziweyo".
Umzekelo wamatye okwenziwa: I-corrundum yokwenziwa, idayimane yokwenziwa, i-quartz yokwenziwa,…
Imizekelo yamatye angengowamvelo abandakanya i-cubic zirconia, equlathe i-zirconium oxide kunye ne-moissanite eyenziwe, engamatye afanayo. Ukulinganisa kukopa ukubonakala kunye nombala welitye lokwenyani kodwa abanazo iikhemikhali kunye neempawu ezibonakalayo.
I-Moissanite inesalathiso esiphakamileyo sokubonisa kunedayimane kwaye xa ibekwe ecaleni kwedayimani elingana nayo kwaye isikiwe iya kuba "nomlilo" ngaphezulu kwedayimani.
Iliwa yinto yendalo, ingqokelela yesixa semaminerali enye okanye nangaphezulu okanye ii-mineraloids. Umzekelo, iLapis lazuli lilitye elinzulu eliluhlaza okwesibhakabhaka. Udidi lwayo lilitye elixabisekileyo. Elona candelo libalulekileyo le-lapis lazuli yi-lazurite (25% ukuya kwi-40%), i-feldspathoid silicate.
Kukho inani lezinto eziphathekayo ezisetyenzisiweyo njengamagugu, kuquka:
intlaka elukhuni yokuhombisa ijuwelari, Ammolite, Ithambo, iCopal, ikorale, Ivory, Jet, Nacre, Operculum, Pearl, Petoskey ilitye
I-mineraloid yinto efana ne-mineral engabonisi ubungqingili. I-Mineraloids inezinto zokwenziwa kweekhemikhali ezahluka ngaphaya kwamanqanaba amkelekileyo ngokubanzi kwizimbiwa ezithile. Umzekelo, i-obsidian yiglasi ye-amorphous kwaye ayiyikristale.
I-Jet ivela kwimithi ebolayo phantsi koxinzelelo olukhulu. Ilitye lelinye elinye ngenxa yobume be-non-crystalline.
Iglasi eyenziwe ngabantu, iplastiki, ...
Amatye anqabileyo endalo ayathengiswa kwivenkile yethu yamatye
I-eye eye agate 12.77 ct
Inkwenkwezi garnet 36.13 ct
I-coral fosil 25.92 ct
IAlexandrite 1.83 ct
Neswili-uhlalele-bahlale 4.00 CT
I-Chrome diopside 3.83 ct
I-Quartz ye-Quartz ebunjiweyo ye-10.51 ct
I-Trapiche amethyst 19.05 ct